FBSမိသားစုဝင်များအတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ!
ချစ်မိတ်ဆွေတို့ရေ! မျှော်လင့်ချက်အသစ်တွေ စိတ်ကူးအသစ်တွေ အစီအစဉ်အသစ်တွေနဲ့ ချီတက်ရမယ့် နှစ်သစ်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ. မိသားစုတွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နယူးရီးယားပွဲလုပ်ပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကကြ၊ စားကြသောက်ကြ မီးပန်းတွေကိုကြည့်ပြီး ဆုတောင်းကြနဲ့ အလွန်ပျော်ရမယ့်အချိန်ပါ. ပြီးတော့ - လက်ဆောင်ဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံလိုတယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံဘယ်ကရမလဲဆိုတာတော့ သိမှာပါ. လူငယ်တွေဆိုရင် မိဘတွေဆီကပဲနေမှာပါ. ဟားဟား 😉! လာမယ့်နှစ်က ဥာဏ်ပညာနှစ်ဖြစ်တာကြောင့် ဘာလုပ်လုပ် ဥာဏ်ပညာနဲ့ချင့်ချိန်ပြီးလုပ်ပါ. အထူးသဖြင့် ထရိတ်ဒင်းလုပ်ငန်းမှာပေါ့ခင်ဗျာ. ပြီးတော့ တစ်ခု သတိရပေးပါ. ကျွန်တော်တို့က မိတ်ဆွေတို့နောက်မှာ အမြဲရှိနေမှာပါ. <3
ရိုးသားစွာဖြင့် သင့်ရဲ့ ,FBS အဖွဲ့သားများ